Posted by ကိုထိုက် at 00:35
My though and prayers are for Pado Man Sha, his family, and the KNU.
15 February 2008 at 02:30
WHAT HE DID?
15 February 2008 at 04:26
Finally he found Peace and Freedom.
My thoughts to his family and his party.
15 February 2008 at 04:44
မလွတ်မြောက်နိုင်ကြသေးဘူး .. ။
ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေမှာလား .. ။
ကြိုးစားတည်ဆောက်ရဦးမယ် .. ။
လေးစားဂုဏ်ပြုဦးညွှတ်လိုက်ပါ၏ .. ။
15 February 2008 at 07:03
15 February 2008 at 11:53
17 March 2009 at 06:34
25 March 2009 at 13:39
成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,
26 March 2009 at 03:29
6 April 2009 at 08:58
6 April 2009 at 09:03
13 April 2009 at 14:18
13 April 2009 at 15:53
မြန်မာပြည်က ကောင်းဘွိုင် သေနတ် မပစ်ပါ .. ။
မြန်မာပြည်က ကောင်းဘွိုင် သီချင်း နားဆင်ရန်
လူထု စိန်ဝင်း၏ ပြည်သူလူထုအား သတိပေးချက်
GW's 2nd Song
The More We Unite, The Closer Our Victory Is.
အာဏာရှင် နအဖ၏ လမ်းပြမြေပုံအရ လုပ်မည်ဖြစ်သော ဆန္ဒခံယူပွဲတွင်
Should we say "Yes" toaconstitution that has written by this situation?
Click here to see large picture
မိတ်ဆွေများ ပြောလိုရာ ပြောထားနိုင်ပါတယ်။ မေးလ် ပို့ချင်လျှင်တော့ လိပ်စာက tzhtike2004@gmail.com
ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ တရားစီရင်ရေး
အသေးစိပ် အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(Update at 13.Dec.2007 GMT 22:30)
To see and type burmese fonts, click here (keyboard installation .. password is .... alpha mandalay ...)
Burma needs you
No way to get off throne
Beijing Oylmpic 2008
To share our genuine feelings about Burma and its path to freedom.
burmese bloggers w/o borders ................... Give to Burma
The picture of 24.09.07
ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ သတင်းအချက်အလတ်များနှင့် ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်များ အား မျှဝေပေးသော ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများကို အားလုံးကိုယ်စား ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။
သံဃာတော်များ၏ သံဃာ့ ကံဆောင်ခြင်းပြုရန် တရားဝင် သိမ်ဝင် ရွတ်ဖတ်ခြင်း
ဗဟန်းမြို့နယ် မယကရုံးမှ ထွန်းလှစိန် ... မဟာစည် သာသနာ့ ရိပ်သာ အနီးရှိ အောင်သစ္စာ ရပ်ကွက် နေထိုင်သူ
သတင်း အပြည့်အစုံကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ထိုသို့သော လူရမ်းကားများအကြောင်း အပြည့်အစုံကို သိလိုလျှင် အသားမှထွက်သည့် လောက်ကောင်များ တွင် သွားကြည့်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီးသော အမျိုးသားညီလာခံ အခြေခံမူ ၁၀၄ ၏ မူရင်းစာအုပ်ကို ဒီနေရာတွင် သေသေသပ်သပ် pdf file ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့ လက်လှမ်းမီသလောက် ပြန်လည် ဖြန့်ဝေရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် . . ခင်ဗျာ။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကျဆုံးခဲ့ရသော အာဇာနည်ကြီးများအား လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုပါသည်။
၂၀၀၈ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ (9)
ကပ္ပတိန် ၀က်ဝံပြာ (3)
ပြန်လည် ဖြန့်ဝေခြင်း (8)
မြန်မာ့ သမိုင်း (5)
သတင်း ဓါတ်ပုံ (6)
ဟိုဟို ဒီဒီ (8)
အမျိုးသား ညီလာခံ ၁၀၄ ချက် (4)
တွေးမိသော အကြောင်းများ (7)
နှစ်သက်သော စာများ (3)
မြန်မာ လူမျိုးများ သွားရောက်သင့်တဲ့ web pages များ
သွားကြည့် ပြီးပြီလား Burma Lawyers' Council DVB RFA YAMC ယနေ့ မြန်မာ ရိုးမ ၃ သစ္စာ ဟစ်တိုင် ဧရာဝတီ ခေတ်ပြိုင် မြန်မာတီးရှော့(ပ်)
ချစ်စရာ မိတ်ဆွေတွေပေါ့။ Freedom Uprising s0what အရှင်မေတ္တာစာရ ကိုဈန် ကိုတတ်စလာ ကိုဖိုးဇေ ကိုမိုးတိမ် ကိုသင့် ကဒေါင်းညင်သာ ချမ်းမြစိုး ဂျစ်တူး စမိုင်းမေ ဆရာမ မေငြိမ်း ညလေး နစ်နေမင်း ပင့်ဂိုလ်း ပုထုဇဉ် ဘာညာ မခင်မင်းဇော် မသဒ္ဓါ လင်းလက်ကြယ်စင် သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာရဟန်းတော်များ သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ ဆေးဗားမွန်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ မြန်မာလူငယ်များ ကြာပီ အေးမြဇင်
လေးဖြူက အဖေ ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကို ရည်ညွှန်းတာလဲ ...
မျိုးကြီးက နားနားပြီး ပြောတဲ့။ ဘယ်သူ့ကိုလဲ .....